Anna Amagciwane Engeke Esaba: impilo kanye nomsebenzi we-actress
Anna Amagciwane Engeke Esaba uyakuthanda skiing kanye uthango. She - umculi omkhulu, lalokhu lingabonakala ngokubheka uchungechunge "Black Raven", eyayithi sidlala enye yezinkulumo nabalingiswa abasemqoka - Tatiana Pribludovu-Larin. Ngaphezu kwalokho, ngekubambisana ne Migunova wabhala amaskripthi amafilimu.
Anna Amagciwane Engeke Esaba: Biography
Anna wazalwa 14 ku Mashi 1972 eLeningrad. Sasebuntwaneni actress esizayo kwakuhluke kakhulu serene ukuze afinyelele eqophelweni lapho ngineminyaka engu-12 ngesikhathi i-skiing hhayi Anna Amagciwane Engeke Esaba seluthole umgogodla cord yokulimala. Kungenzeka, it is eminye bathonya uhlamvu umdwebi esizayo. Ukwelashwa kwaba isikhathi eside, futhi zezinkinga zempilo ephelezelwa Anna Amagciwane Engeke Esaba eminyakeni embalwa, ukwenza intombazane eyingozi. Mayelana nendlela tie konke ukuphila kwakhe nezwe cinema, ecabanga kuphela kokuphothula esikoleni. Lesi sinqumo sathathwa ngokuqinile - yangena IBamba nokuqondisa umnyango GITIS. Ngemva kweminyaka emibili engifundela esikoleni esiphakeme, waqala ukufundisa amasu nokukhulunywa studios ngasese, kanye iqhaza ukusebenza ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Life Ana, ikhula ngesivinini futhi kuba elihlale iyezwakala.
Ukudala Anna Amagciwane Engeke Esaba
"Ukuvuna Moon" ifilimu baba okokuqala i-movie, lapho wadlala Anna Amagciwane Engeke Esaba. Umlingisikazi ngokushesha wathatha indima abaholayo, kodwa kwaba iminyaka emine kuphela ngemuva kokuqeda izifundo zakhe e GITIS. Ngaphambi kwalokho, u-Anna wasebenza play yaseshashalazini. Nakuba isigaba waseshashalazini, yena ngemuva ukubonakala ebhayisikobho wahlala ethembekile emhlabeni. Lapho ibhayisikobho isiphelile, "Ukuvuna Moon" baqala ukudubula ochungechungeni.
A Anna Amagciwane Engeke Esaba ngempela owaziwa baba ngemva uchungechunge ezingaqondakali "Black Crow". Heroine le filimu Tatyana Larina kwakulungile ithambo, ngokungafani kuya hotties zibomvu Zakharzhevskaya. Kungenzeka nganoma isiphi esinye actress isithombe sale ntombazanyana uthole ezimbalwa buthuntu futhi insipid, akukho ngozi lezi "izinhlamvu blue," akekho noyedwa ofuna ukudlala. Nokho, u-Anna nikwenzile Herm Tatyana Larina ochungechungeni umuntu ezithakazelisayo futhi ngempela namesake wakhe kusukela "Eugene Onegin". Kodwa ukuthandwa uchungechunge "Black Crow" umlingiswa oyinhloko kunohlangothi omubi - lapho beqeda actress Umdwebo ahlinzekwa ikakhulukazi izindima nge kungokwamademoni ...
Umlingisikazi Anna Amagciwane Engeke Esaba: uthando ukuphila
Umshado wokuqala yachitheka umdlali waseshashalazini. It wahlala iminyaka 8, actress Anna Amagciwane Engeke Esaba. ukuphila Siqu baqhubeka umshado wakhe wesibili. Washada ngo-1998 Okhethiweyo Anna waba uVlad, umkhiqizi wakhe. Ekuqaleni, phakathi kwawo savela ubuhlobo luyingxenye zokusebenza kanye yokudala, kodwa esikhathini esithile bahamba ngasese. Ekugcineni, kanye Vlad, bayabona ukuthi azange sasifuna isikhathi eside Isiphelo sakhe. Cishe ngemva konyaka babenesifiso indodakazi owayebalwa Angelica.
Ukubukeka ingane Zashintsha emkhakheni we umdlali waseshashalazini. Emva kokuzalwa Angelica injongo yokuphila-Anna waqala ekhaya nomndeni. Washiya ifilimu zokugcina, kanye izinhlelo zabo zokudala. Empilweni yakho yakudala akazange aphikisane fortune emndenini, nomyeni wakhe washintsha indawo yokuhlala (kwesokunxele kwelinye nedlelo Petersburg), futhi ushintshe inamba yefoni. Muva nje, actress wabhala futhi wakhuluma onke: - ". Pribludovu-Larin - kweso waba inkanyezi" "Anna Amagciwane Engeke Esaba lowo lolungenamaphutsa ukudlalwa ochungechungeni TV" Black Crow Abagxeki ngazwi linye wabikezela ngekusasa lakhe elikhulu, futhi izilaleli amthanda ngempela. Kodwa Anya wasenyamalala emehlweni: wayeka ukuqopha futhi izingxoxo. Eminyakeni ethile yayo kwakuzwakala. Kamuva kwathi actress wakhetha okuthulile umkhaya ujabule umsebenzi.
Hhayi nje Anna Amagciwane Engeke Esaba watshela lona wesifazane ukuthi ngithanda ethi uhlamvu komuntu sibonisa nomgomo, ukuthi abantu bazalwa a Ubumnene ezithile, kodwa ungakwazi ukushintsha njalo konke kube ngcono. ukuhlukumezeka Sinzima wathola actress ebuntwaneni (kokucindezelwa ukwa), okwaholela ukuvakashelwa yaso engapheli kothisha namafolda radiographs. Naphezu kweqiniso lokuthi odokotela benza konke ababengakwenza, yokutakula eyathatha iminyaka eminingi, futhi phakathi naleso sikhathi, u-Anna wajaha sebuhlungwini obunzima. Nokho, akazange adikile. Wayekholelwa ukuthi injabulo kithi, kuyafaneleka ukuba akuxhomekile lutho futhi akekho, into esemqoka - ukukhetha: ukuba sijabule noma cha.
Anna Amagciwane Engeke Esaba ukuthi ngisho esimweni esibonakala ongenafu, umuntu ngeke kusadingeka choice give up noma ukubheka abanye abantu naye awela izimo ezinzima, kodwa ukuthola amandla ukuphuma bese behlala ngenjabulo ukuphila kwabo konke. Wazibheka ubunjalo indoda owazi indlela ukujabulela ukuphila. Injabulo nekavakatjhela ezingalindelekile ngokuphelele. Wayengathola endaweni ethile emuva kwesikhathi, emi traffic zasendle futhi wezwa emsakazweni ukuze ingoma eyintandokazi yakho, ukuze ngijabule ngempela. Nakuba anyamalala kusukela izikrini TV, kodwa baningi ngisafuna ku eziveza wenza, izingxoxo zakhe nezithombe. Anna Amagciwane Engeke Esaba has a zwi elihle.
Filmography Anna Amagciwane Engeke Esaba
Le filimu kuqala nge elijabulela "Ukuvuna Moon" (1998) nesithi "Directory of Death" (1999). Esikhathini kusuka 2000 kuya ku 2005, u-Anna izinkanyezi ku uchungechunge sethelevishini "Black Crow", e-zabalingiswa "Clean ngoMsombuluko" (dlala), "Umbukiso", "Kamensky".
"Black Raven" Yindaba ezimboze isikhathi kusukela 1950s kuze kube namuhla. Indaba Umdlalo sika uthole indaba yokuphila ka abesifazane ababili, ozalwa nguyise efanayo futhi onegama elifanayo - Tatiana. Tatiana Larina-Pribludovu ochungechungeni kudlalwa Anna Amagciwane Engeke Esaba.
Ngo-2001, ochungechungeni ithelevishini "The Mole" actress lolungenamaphutsa kudlalwa Masha senkosikazi Kuzmichev. Ngo-2003. Wanyathelisa uchungechunge amafilimu kanye nomlingisi u-actress: "Ondine", "Taxi Driver", "1 Evlampiya Romanova: Manicure sokwahlulela abafileyo," "Buyisela uMukhtar". Ngo-2004, u-Anna okunenkanyezi the comedy zomculo Unyaka omusha "okusha Man" futhi ochungechungeni TV "Ithemba eshiya kube sekugcineni." Ngo-2006, washiya ifilimu serial "Dead, uyaphila, esiyingozi" obonisa Anna Amagciwane Engeke Esaba.
Sasha "White". "Brigade" futhi iqhawe layo
Troyanova-Jan - actress cinema yesimanje
Hitchcock: uhlu izindaba kanye kobufakazi. Uhlu Alfreda Hichkoka amafilimu: izithombe best
Amabhayisikobho engcono mayelana punk
Le filimu "Lucky in Love": abalingisi, izindima, sakhiwo
Nvidia GeForce GTX 460: Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
I-Yekaterinburg, imitholampilo yokuhlinzwa epulasitiki - yiba yinto enhle kuphela
Kuyini Seborrheic dermatitis?
Uwoyela Fish izinwele: ukubuyekezwa. uwoyela Fish ngokumelene nezinwele
Uphi central ukulawula ukukhiya iyunithi? Ukufakwa, eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa kungenzeka
Imfashini izicathulo zabesilisa ngo-2013
Isidlo esimnandi ne ubhiya ekhaya
Uzohlala kuphi ngoMashi
Imiphumela nokungahlanzeki: isifo sezinsini